နှစ်စဉ်ကောင်းမွန်သောအမျိုးသမီးစစ်ဆေးမှုနှင့် Pap Smear လမ်းညွှန်များကိုပြောင်းလဲခြင်း
အမေရိကန်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုကောလိပ် (“ ACOG”) မှ
နှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု (နှစ်ပတ်လည်စာမေးပွဲ") သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု၏အခြေခံကျသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ရောဂါအတွက်အန္တရာယ်အချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊
ပိုမိုသိရှိလိုပါက? လက်တွေ့လမ်းညွှန်မှုနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ / ကော်မတီ၏ထင်မြင်ချက်များ / မီးယပ်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ဆိုင်ရာကော်မတီ / ကောင်းမွန်သောအမျိုးသမီးခရီးစဉ်
Pap Smear (သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် smear test) သည်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကင်ဆာနှင့်ကင်ဆာဖြစ်စဉ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည့်သားအိမ်ခေါင်းစစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုကပြလိမ့်မည် ထူးခြားသော အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကျန်းမာလျှင်သို့မဟုတ် သာမန် ရလဒ်သည်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည် - အချိန်၏ 25% ခန့်။ ၎င်းသည်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၏ ၅% အထိပင်လက်လွတ်သွားနိုင်သည်။
AGOG လမ်းညွှန်ချက်များ - ကျွန်ုပ်သည်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးမှုကိုအကြိမ်မည်မျှပြုလုပ်သင့်ပြီးမည်သည့်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သင့်သနည်း။
သင်၏အသက်အရွယ်နှင့်ကျန်းမာရေးသမိုင်းပေါ် မူတည်၍ မည်မျှနှင့်မည်သည့်စစ်ဆေးမှုများကိုမူတည်သည်
အသက် ၂၁ မှ ၂၉ နှစ်ကြားအမျိုးသမီးများသည်သုံးနှစ်တစ်ကြိမ်တွင် Pap Smear စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သင့်သည်။ HPV စစ်ဆေးခြင်းကိုမထောက်ခံပါ။
အသက် ၃၀ မှ ၆၅ နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီးများသည် Pap Smear စစ်ဆေးမှုနှင့် HPV စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်သည် (ပူးတွဲစမ်းသပ်ခြင်း) တိုင်း5နှစ် (ဦး စားပေး) ။ သုံးနှစ်တစ်ကြိမ်တွင် Pap Smear စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လည်းလက်ခံနိုင်သည်။
ရှောင်ရှားခြင်းကိုစစ်ဆေးမှုမတိုင်မီ ၄၈ နာရီအကြာတွင်ပြုလုပ်သည်
အောက်ပါတို့ကိုသိထားပါ - (ဤအကြောင်းအရာများသည် Pap စစ်ဆေးမှု၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်မှုများတွေ့ရှိပါက)
နောက်ဆုံး Pap Smear စစ်ဆေးမှု၏ရက်စွဲနှင့်ရလဒ်
ပုံမှန်မဟုတ်သော Pap Smear စမ်းသပ်မှု၏သမိုင်း
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းအဆင်မပြေမှုကိုရှောင်ရှားရန် Pap Smear စစ်ဆေးမှုမတိုင်မှီအချည်းနှီးသောအုတ်တံတိုင်း။
လိုက်နာပါ Clinician ရဲ့ညွှန်ကြားချက် နောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်မှုနှင့်လိုအပ်သောထပ်မံစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်
ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုပါသလား? ငါတို့စစ်ဆေးပါ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်များ စာမျက်နှာ
Pap Smear ရလဒ်များပုံမှန်မဟုတ်သောကုသမှု
ကုသမှု Options ကို
IUD's အတွက်ချိန်းဆိုမှုများသည်သင်၏သံသရာ၏ ၅ ရက်မှ ၉ ရက်ကြားတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ (ရာသီလာသည့်သွေးထွက်သည့် နေ့မှစ၍ သင်၏သံသရာ၏အစကိုရေတွက်ပါ) ။
တစ်နာရီ ၁ မှ ၁ နာရီခွဲအထိဗဟိုတွင်ရှိရန်စီစဉ်ပါ
သင်၏ IUD သွင်းခြင်းချိန်းဆိုခြင်းမတိုင်မီ
ထိုးမသွင်းခင် ၄၈ နာရီအကြာတွင်ဝက်ဝံကိုရှောင်ပါ
Tylenol သို့မဟုတ် Motrin ကိုသင်၏ချိန်းဆိုမှုမတိုင်မီမိနစ် ၃၀ ကြာယူပါ
သင်၏ IUD သွင်းခြင်းချိန်းပြီးနောက်
နောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်မှုများအတွက် Clinician ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလည်းသင်သေချာစွာလိုက်နာသင့်သည်။
သင့်အားချက်ချင်းအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းလိင်လှုပ်ရှားမှုမှ ၃ ရက်ရှောင်ရန်အကြံပြုသည်။